ယနေ့သတင်း ~ ဒီမိုဝေယံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်မှ သက်သေထွက်ဆိုရန်တင်ထားသော သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်၊ NLD ဒု ဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးနှင့် NLD ရှမ်းပြည်နယ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ခင်မို့မို့ တို့အား နအဖ မတရားရုံးမှ မည်သည့် အကြောင်းအချက်ကြောင့် ပယ်ဖျက်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်လွှာကို ယနေ့ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယနေ့ထိုသတင်းအား ဆက်လက်ဖော်ပြပေး မည်ဖြစ်ပါကြောင်း.............
ဒီပဲယင်း ၇၃လပြည့်ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအန...
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် လာမည့်သောကြာနေ့ မြန်မာပြည် သ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သက်သေ ၂ဦး ဖြစ်တဲ့ NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဥ...
လူထု တရပ်လုံး အတွက် အမှန်တကယ် စတေးခံနေတဲ့ အကောင်းဆ...
ံHeal The World.
၂၇ နေ့လက်ရှိ နောက်ဆုံးရ သတင်း။
၂၆ရက်နေ့ နေ့လည် သတင်းများ။...။
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့တွင် A/H1 N1 တုပ်ကွေးရော...
လူထု တရပ်လုံး အတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံး မြေသြဇာအဖွဲ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုရက်ရွှေ့ဆိုင်းရဦးမည်။ (ခေတ်ြ...
၇ ဂျူလိုင် အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားစာ (ဂျပန်နိုင်ငံ)။......
ဒေါ်စုမှ သားနှစ်ယောက်သို့ အမှာစကား။
ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွဋ္ဋ် ဇွန်လ အစီရင်ခံစာ ။...။(ကိုဖိ...
၂၂ ရက်နေ့ည နောက်ဆုံးရ သတင်းများ ။.....။
ရဟန်း၊သံဃာတော်များအား မကောင်းဆိုးဝါးများက ကြောက်ကြ...
ခေတ်သစ် နိုင်ငံရေး ပုဒ်မ (ခ)၊အမြင်ကပ်ပုဒ်မ၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၆၄)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အင်းစိန်ေ...
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ဇူလိုင်မှာ မြန်မာပြည်သွားဖို့ မျှေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် မွေးနေ့သဝဏ်လွှာ မြန်မာ့အရေ...
Birthday message from AIPMC to Daw Aung San Suu Ky...
တပ်မတော်သာ အဖိ တပ်မတော်သာ အဖါး။
ယနေ့ည နောက်ဆုံးရ သတင်းများ။.....
ကလေးများကို စစ်တပ်ထဲ သွတ်သွင်းနေ (ဦးအေးမြင့်နှင့်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၄)ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် အဖွဲ့ ဝင် (၃) ဦးအာ...
၁၃ရက်နေ့ မနက်ခင်း သတင်းများ။....။
ဂငယ်လေးဆူ အုတ်သစ်ထူ။( ပြန်ဖတ်လိုလျှင် click လုပ်ပါ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုရက်ချိန်း ၂၆ ရက်သို့ ချိန်းဆ...
၂၁ရာစု ကျောက်ခေတ်ဂူအောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ။....။...
ဥပဒေအရလိုအပ်သလို ပြဿနာကို လမ်းဆုံးထိ ဆောင်ရွက်မည်။...
၁၀ ရက်နေ့ရ နောက်ဆုံး အထူးသတင်းများ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ဖို့ အင်ဒို၊ အမေရိကန် နိ...
ဘယ်မလည်း..ဦးပေါင်းစင်းနဲ့ မြင်းညိုရှင် မသဒ္ဓါ ( ၆...
တုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ သတင်းတပုဒ် (ပေးစာ)link
ပုလင်းတူ ဗူးဆို့။....။VOA သတင်း။
ဗိုလ်ချုပ်တစုနဲ့ ဒီအမှု (နေ့သစ်ဘလော့မှ)
- စင်္ကာပူဝါရင့်ဝန်ကြီး ဂိုချုပ်ထောင် မြန်မာနိုင်ငံသ...
- ဗိုလ်ချုပ်ရွှေမန်း တရုတ်ပြည်ကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် ...
ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိသျှ သံရုံးများက ဒီချ...
နအဖ၏ မတရား ထုတ်ပယ်ခံရသော သူငယ်ချင်းများအတွက် အမှတ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ ဂျွန်ဝီလျံယက်တော ၀င်ေ...
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်နှင့် DVB အင်တာဗျူး part2
ဒေါ်စုအမှုအတွက် သက်သေ ၃ ဦးအရေး တရားရုံးက ရက်ချိန်း ...
Breaking News( အထူးသတင်း)
“ပြည်တွင်းရေးတော့ မှန်တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား ...
၂ ဇွန် ၂၀၀၉ ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်။
နအဖ တရားရုံး ဘာလဲ၊ဘယ်လဲ?
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၏ ဒေ...